कोभिड–१९ मा स्वास्थ्यकर्मीको दैनिकी - Pradesh Today
Homebreaking-newsकोभिड–१९ मा स्वास्थ्यकर्मीको दैनिकी
दाङ, १० जेठ । कोरोनाको सन्त्रास यथावत । विश्व कोरोनाका कारण आक्रान्त छ, हरेक नागरिकहरू कोरोनाबाट बच्न आफ्नो सुरक्षा अपनाईरहेका छन् ।
नेपालमा कोरोना दैनिक बढिरहेको छ । पछिल्लो समय देशका ३८ जिल्लामा कोरोना संक्रमण भएको छ । कोरोना नियन्त्रण र यसलाई फैलिन नदिन विभिन्न किसिमका तयारी र क्रियाकलापहरू अघि बढेका छन् ।
यही बीचमा नेपालमा ५ सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमणको तथ्याङ्क देखिएको छ । यसमा ५ नं. प्रदेश कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको छ । संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
नेपालमा कोरानाको कारण तीनजनाको मृत्यु भएकाहरूमध्ये ५ नं. प्रदेशमै दुईजनाको मृत्यु भैसकेको छ ।
यो प्रदेशमा २ सयजना भन्दा बढी संक्रमण हुनेको तथ्याङ्क पुगीसकेको छ । कोरोना संक्रमण हुनेहरूमा अग्रभागमा रहेर खटिने स्वास्थ्यकर्मी ५ जना, १३ जना सुरक्षाकर्मी, केही पत्रकारहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको अगुवाईमा जिल्लामा रहेका १० वटै स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी सञ्चारकर्मीसँगै रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य संघहरूलगायत विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिहरूले जिल्लामा कोरोना नियन्त्रण,
सचेतना र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत तथा स्वास्थ्य सेवा उपलबध गराउने कुरामा एक भएर अघि बढेको अवस्था छ ।
कोरोना नियन्त्रण र सचेतनाको कुरामा जिल्लामा विभिन्न व्यक्तिहरूले निभाएको भूमिका र पु¥याएको योगदानको पनि निकै प्रशंसा हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहमा रहेर कोरोना नियन्त्रण र रोकथामसँगै स्वास्थ्य सेवालाई चुस्तदुरूस्त पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूको दैनिकी,
कोरोना व्यवस्थापनको पक्षमा गरेका प्रयासहरू खोतल्ने प्रयास गरेका छौं । स्वाथ्यकर्मीहरू आफूलाई कोरोना नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा रहेर खटिरहेका छन् ।
काममा उर्जा मिलेको छ
सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु अघिदेखि कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न किसिमका तयारीहरूमा जुटेका थियौं । जसले गर्दा काम गर्न केही सजिलो भएको अनुभव भए पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू यो बीचमा झेल्दै र त्यसको समाधानको लागि हामी अघि बढिरहेका छौं ।
हालको समयसम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा क्वारेन्टाइन बेड संख्या ३ सय ५० रहे पनि त्यो पर्याप्त छैन जसको लागि तत्काल प्रत्येक वडाहरूमा १ सय बेडको क्वारेन्टाइन बेडको संख्या थप गर्ने तयारीमा जुटेको अवस्था छ ।
यो बीचमा जिल्ला बाहिरसँगै भारतबाट ३ सय ८८ भित्रिएका छन् भने उनीहरूमध्ये १ सय ३३ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
त्यसमध्ये ४७ जनाको आरडिटि र ९३ जनाको पिसिआर टेष्ट हुने काम भएको छ । चेक भएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपनि तुलसीपुर पछिल्लो समय निकै जोखिममा रहेको हामीहरूले यो बीचमा महसुस गरेका छौं ।
त्यसको लागि सबै सरोकार निकायहरूले आवश्यक सहयोग समन्वय गर्न निकै अत्यावश्यक भएको महसुस गरेको छु ।
यो बीचमा प्रदेश संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा कोरोना नियन्त्रण र काम गराईमा निकै समस्या भएको महसुस भईराखेको छ । सोचेअनुरूप जाँच गर्न नसक्दा निकै समस्या भएको छ जसले गर्दा केही समयमै भयावह स्थितिको सिर्जना नहोला भन्न सकिदैन ।
मुख्य समस्या भनेको स्थानीयहरूमा त्रास फैलिदा यसको समाधान गर्न केही समस्या देखिएको छ । हामीले होम क्वारेन्टाइनलाई पनि प्राथमिकताका साथ जोड दिएका छौं ।
यो बीचमा कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न टिमहरू निर्माण गरेर अघि बढ्दा केही सहज भने भएको छ । १९ वटै वडामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य सामुदायिक इकाईलाई नियमित स्वास्थ्य सेवाको लागि तयारी रूपमा राखिएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू पनि निरन्तर आफ्नो काममा खटिदिदा काम गर्न केही सजिलोसमेत भएको छ ।
तीनवटा एम्बुलेन्सलाई हामीले २४सैं घण्टा अर्लट बनाएर राखेका छौं । उपमहानगरपालिका भित्र रहेका २५ सय बढी दीर्घरोगीहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेर उनीहरूलाई औषधि व्यवस्थापन गर्ने कार्यसमेत गर्न भ्याएका छौं । गर्भवती सुत्केरी महिलाहरूको नियमित स्वास्थ्य चेक जाँचलाई महत्वका साथ लिदै स्वास्थ्य चेक जाँचमा निरन्तर सेवा दिइ राखेका छौं ।
नगरका विभिन्न चारवटा स्थानमा नियमित स्वास्थ्य चेकको लागि हेल्थडेक्स निर्माण भई कार्य थालनी भएको छ ।
यो बीचमा सुरक्षाकर्मी सञ्चारकर्मी, रेडक्रसकर्मी उद्योगी, व्यापारीलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको साथ र सहयोगको कारण कोरोना नियन्त्रणको लागि काम गर्न निकै सहज भएको अनुभव भएको छ ।
त्यसको लागि सबै सहयोगीप्रति आभारसमेत प्रकट गर्न चाहन्छु र आउँदा दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षासमेत गर्दछु ।
यो बीचमा कोरोनासम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रेषण, हटलाईन सेवा परामर्श, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालयका गतिविधि सञ्चालन विभिन्न निकायसँग समन्यव सम्पर्क क्वारेन्टाइन अनुगमन,
ट्रेसिङ, आफ्नो दैनिकी सञ्चालन यावत कुराहरू गरिरहदा कहिलेकाहिँ निकै थकाईको अनुभूति हुने गरेको छ । तर पनि आफूभित्रको कामप्रतिको उर्जा र सामाजिक सेवाको भावले थकाईलाई पनि त्यति समस्याको रूपमा लिएको छैन ।
हरेक क्षेत्रको साथ र सहयोगको कारण झन थप काममा खटी सेवा पु¥याउन थप उर्जा आफूभित्र पैदा भएको अनुभव हुने गर्दछ ।
यो बीचमा घरपरिवार ५ वर्षको छोरालाई घरमै छोडेर बिहान ५ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म निरन्तर काममा खटिदा अनावश्यक टिकाटिप्पणी र कहिलेकाहिँ सोचे अनुरूपको आवश्यक सहयोग नमिल्दा केही दिक्क लाग्ने गरेपनि यो बीचमा भएको उपलब्धिलाई सम्झेर थप काम गर्नको लागि उर्जा मिल्ने गरेको छ ।
हाम्रो छिमेकी जिल्ला र पालिकाहरूमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै तुलसीपुरमा पनि थप जोखिम देखिएको छ । एकआपसमा आवश्यक समन्वय, सम्पर्क र सहयोगका साथ काम गर्न निकै जरूरी भैसकेको छ ।
त्यसको लागि आम नगरबासीहरूको एक भई कोरोना नियन्त्रणको लागि जनप्रतिनिधिको थप सक्रियता यो क्षेत्रमा रहेका सुरक्षा निकाय, सञ्चारकर्मी, रेडक्रस, निजी क्षेत्र विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिहरू अझ क्रियाशील हुन जरूरी भएको देख्दछु ।
तुलसीपुर उपमहानगर स्वास्थ्य शाखा
निरन्तर फिल्डमै छौं
सुरूवातको चरणमा डरसँगै निकै चुनौतीको रूपमा रह्यो । त्यो आमनागरीक मात्र होइन हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत यो भाइरस नयाँ र विश्वव्यापी फैलिएर त्राही–त्राही पारिरहेको बेला डरसँगै यसको कसरी नियन्त्रण गर्ने र आफूसँगै नागरिकलाई कसरी बचाउने ?
भन्ने कुरा निकै चुनौतीको रूपमा देखाप¥यो । स्वास्थ्यकर्मीसँगै जनप्रतिनिधि र आम मानिसहरूमा निकै ठूलो मानसिक समस्यासमेत देखियो ।
सामाग्रीहरूबारे जानकारीको अभाव त्यसको व्यवस्थापन प्राविधिक ज्ञानको उचित जानकारी नहँुदा सामग्री प्रयोगमा समस्या, गुणस्तर सम्बन्धी ज्ञानको अभाव यावत कुराहरूले निकै तनाव भोग्नुपर्ने अवस्थासमेत रह्यो । तर पनि विस्तारै हामीहरूले आफूहरूलाई यो विषयमा आफै सचेत बन्दै जानकार बन्ने कोसिस ग¥यौं ।
जसले गर्दा अहिले काम गर्ने कुरामा केही सहज भने भएको छ । हालको अवस्थासम्म आउँदा ४० बेडको क्वारेन्टाइन र १० बेडको आइसोलेसन तयार गर्ने काममा सफल भएका छौं भने केही दिनभित्रै प्रत्येक वडाहरूमा २०/२० बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने तयारीमा हामी जुटिरहेका छौं ।
शान्तिनगर गाउँपालिकामा रहेका तीनवटा स्वास्थ्य केन्द्र र वार्डमा रहेका ४ वटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई निरन्तर तयारीमा राखेका छौं, अहिले पनि सेवा निरन्तरता दिईराखेका छौं ।
सुरूवातमा यस गाउँपालिकामा देशका विभिन्न जिल्लाबाट स्थानीयहरू आउने क्रम भएपनि त्यो अहिले कम भएको र हाल भारतका विभिन्न स्थानबाट नागरिकहरू आउने क्रममा रहेकोले यो बीचमा हामीले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्नुका साथै उनीहरूको ट्रयाकिङ गर्ने कुरामा जोड दियौ ।
यो बीचमा यस पालिकामा ३८ जनाको आरडिटी र २६ जनाको पिसिआर चेक भएको छ भने चेक भएकाहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । हालसम्म आउँदा ८८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकिएको छ भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा आफ्नै घरमा पठाइएको छ ।
यो त भयो हामीले अहिलेसम्म गरेका कार्यहरू । यो बीचमा फिल्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूले निकै समस्या झेल्नुपरेको छ ।
त्यही पनि देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यलाई महत्व दिदै हामीहरू फिल्डमा खटिरहेका छौं । सीमित जनशक्तिमा कार्य क्षेत्रमा खटिदा हरेक कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भइराखेको छ ।
दाङका विभिन्न स्थानमा संक्रमण देखिने व्यक्तिहरूको पहिचान भैरहदा यसपालिकामा पनि संक्रमण भएका व्यक्तिहरू नहोलान् भन्न सकिदैन ।
तर हामीकहाँ भएको व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीले संक्रमित पहिचान भैहाले भने उनीहरूको उपचार कसरी कहाँ गर्ने ? भन्ने समन्वयको अभावले गर्दा दिक्कसमेत लाग्ने गर्छ ।
अहिले पनि हामीकहाँ कोरोना नियन्त्रणको सबै जिम्मा स्वास्थ्यकर्मीको हो भन्ने अन्य कर्मचारी तथा सरकोकारवाला निकायहरूको बुझाईले काम गर्दा कहिलेकाहिँ निकै तनाव हुने गरेको म आफूले अनुभव गरेको छु । स्व
यम् म आफू जिम्मेवारी लिएदेखि बिहान ५ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म निरन्तर काममा खटिरहेको हुन्छु ।
यो बीचमा परिवारसँगै बस्ने फुर्सद समेत पाईराखेको छैन । खाना, नुहाउन र कपडा धुनसमेत हरेक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समस्या परेको म आफूले अनुभूति गरेको छु ।
त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीको यस्तो खालको समस्याको बाबजुद निरन्तर फिल्डमा खटिरहेको हुँदा सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक साथ र सहयोगको समेत अपेक्षा गर्दछु ।
सबैको साझा लडाइ
कोरोना नियन्त्रणको लागि हामी निरन्तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका छौं । यो बीचमा स्थिति नियन्त्रणमा आउनुको साटो झनै भयावह हुँदै गएको अवस्था देखिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्यकर्मी आफै एक्लैले केही पनि गर्न नसक्ने भएको हुँदा हरेक क्षेत्रको साथ र सहयोगको आवश्यक रहेको देख्दछु । आमनागरिकसँगै हरेक जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सकरात्मक सोंच र कोरोना नियन्त्रणमा आवश्यक साथको आवश्यकता देखिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चार जगत अग्रभागमा रहे पनि यो लडाईमा आमनागरिकसँगै हरेक क्षेत्र र व्यक्तिको साझा लडाई भएको हुँदा हरेक व्यक्तिले सरकारले भने अनुरूपका कार्यहरू गरी कोरोना नियन्त्रणमा सफल हुनु पर्ने देखिन्छ ।
त्यसको लागि हामी सबैले आफू कसरी स्वस्थ बन्ने ? भन्ने कुरामा निकै चनाखो हुन जरूरी देख्दछु ।
सरकारले बेलझुन्डीमा स्थापना गरेको कोरोना बिशेष अस्पतालबाट हालसम्म १ सय २७ जनाको स्वाव परिक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
जसलाई हामी सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले यो अस्पतालबाट ६ सय ३५ जनाको फिवर क्लिनिक चेकअप गरिएको छ भने अहिले अस्पतालमा १७ जना कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भईरहेको छ । जसमध्ये बाँकेका ८ जना कपिलवस्तुका ६ जना र दाङका ३ जनाको उपचार भैराखेको छ ।
यो बीचमा आमसञ्चार माध्यम लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले पु¥याएको योगदानको कारण अस्पतालबाट दिइने सेवा व्यवस्थापनको लागि सहज भएको छ ।
कोरोना संक्रमणको अवस्था झन भयावह हुने अवस्था देखिएकोले यस अस्पतालबाट दिईने सेवा प्रवाहको लागि सबै क्षेत्रको सहयोगको त्यत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ ।
निरन्तर २४ घण्टा नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनको लागि खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको दैनिकी अस्तव्यस्त बन्दै गईरहेको छ । यो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोवल उच्च बनाउनको लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।
बिहान ४ बजेदेखि नै निरन्तर फोनको घण्टी बज्न सुरू गरेपछि बेलुका अबेरसम्म अस्पतालका गतिविधि कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने कुरामा निरन्तर हामी खटिरहेका हुन्छांै । यो बीचमा आफ्नो निरन्तर दैनिकीदेखि घरपरिवारसमेत हाम्रो लागि टाढा भएको अवस्था छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जसरी अहिलेसम्म हरेक क्षेत्रबाट सहयोग पाईराखेको छौं त्यसैगरी आउँदा दिनमा सहयोग पाउने अपेक्षासमेत गर्दछु । हाललाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर यो अस्पतालमा सेवा दिईराखेको अवस्था छ ।
आउँदा दिनमा अझ यसलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाई सेवा पु¥याउन सकियो भने त्यो हामी सबैको उपलब्धिको रूपमा समेत रहने थियो ।
कोरोना अस्पताल बेलझुण्डी
निरन्तर फिल्डमै रहेका छौं । घरपरिवार भन्दा पनि यो बेलामा गाउँपालिकामा कसरी कोरोना नियन्त्रणमा सफल हुने कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ ?
निरन्तरको खटाईले कहिलेकाहिँ निकै थकित अनुभव गराउँदछ । तर चाहेर पनि विश्राम भन्ने कुरा हाम्रो लागि टाढाको कुराजस्तो भएको छ । अहिले निरन्तर जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको साथमा रहेर हामी फिल्डमा खटिरहेका छौ ।
यो बीचमा थकाईसंगै राम्रो खाने, राम्रोसँग सुत्ने भन्ने कुरा हाम्रो लागि टाढा छ । तर पनि निरन्तर सेवामा खटिरहदा केही आनन्दको अनुभूति पनि हुनेगर्छ । गाँउपालिका बाट निरन्तर साथ र सहयोग मिलिरहेको छ ।
अहिले कोरोना नियन्त्रण हुनुको साटो दिनप्रतिदिन यसको संक्रमण दर झनै बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा आगामी दिनमा कसरी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका योजनाहरू अघि बढ्न सक्ने हुन त्यसले सोच्न बाध्य समेत बनाउँछ ?
जिल्लामा रहेका हरेक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखहरूबीच आवश्यक छलफल गरी यसको रोकथाम, देखिएका समस्या र तिनीहरूको समाधानको विषयमा आवश्यक छलफल हुनसकिरहेको छैन ।
त्यसको लागि वातावरण सिर्जना भयो भने एक किसिमको साझा धारणा र काममा समेत सहयोग आदानप्रदान हुन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
हालसम्म बबई गाँउपालिकामा ५ सय ७० जना भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको छ । जसमध्ये भारतबाट १ सय १, तेस्रो मुलुकबाट ४ सय ६७ जना गाँउपालिकामा भित्रनेको संख्या रहेको छ ।
हामीले यस पालिकामा आरडिटी बाट १८ जना र पिसिआर बिधिबाट ६१ जनाको चेकजाँच गर्न भ्याएका छौं । जुनकुरा अझै पर्याप्त होइन तत्काल यो संख्यालाई अझ बढाउन आवश्यक छ ।
केही समयै ठूलो संख्यामा मानिसहरू भारतलगायतका स्थानहरूबाट भित्रिने जानकारीहरू प्राप्त भैराखेका छन् जुन अवस्थामा एकखालको चुनौती निश्चित रूपमा देखापर्ने पक्का छ ।
जसका लागि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र गाउँपालिकाले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।
त्यसको लागि विभिन्न निकायको महत्वपूर्ण साथ र सहयोगको आवश्यकता देखिनेछ । कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने तरिकाले हेरिदिदा आउने दिनहरू झन भयानक नहोला भन्न सकिदैन ।
म लगायत स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू कोरोना महामारी शुरूवात भएदेखि निरन्तर रातदिन फिल्डमा खटिएका छौं । निरन्तरको खटाईले कहिलेकाहिँ निकै गाह्रोसमेत हुने गरेको छ ।
पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पनि हाम्रो लागि एउटा समस्या रहेको म आफूले अनुभूति गरेको छु । यो बीचमा स्वास्थ्यकर्मी मात्रैको जिम्मेवारी हो भन्ने नठानेर अन्य शाखा तथा फिल्डमा रहेका हरेक नागरिकहरूले समेत कोरोना नियन्त्रणमा साथ र सहयोग पु¥याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।